The Best Archer Quotes avy amin'ny Fate Stay Night Anime - Hafa
The Best Archer Quotes avy amin'ny Fate Stay Night Anime
Mitady fitanisana Anime izay hampieritreritra anao amin'ny fiainana na hampiala voly anao?
Ary angamba ny teny nindramina azonao alaina aingam-panahy?
Archer avy amin'ny andian-tantara anime Fate Stay Night dia manana ny sasany amin'ireo teny nindramina tsara indrindra ho an'ireo mpanompo 7 rehetra.
Ary na dia amin'ireo mpilalao fototra rehetra aza.
Mahitsy izy, toy ny Rin Tohsaka . Ary ny teny notsongainy dia nidona mafy tamin'ny toerana mety.
Ary izany no mahatonga an'i Archer ho olona malaza amin'ny mpiady ady 7 Grail Masina.
Na dia mbola tsy nijery aza ianao Lahatra Mijanona , ho azonao atao ny manala zavatra avy amin'ireto teny nalaina ireto, na inona na inona!
Fitanisana ny mpandefa zana-tsipìka
“Angano fotsiny ny faniriana ny ho faly ny tsirairay dia angano fotsiny!” - Archer
“Misy toerana vitsy kokoa hatrany antsoina hoe“ fahasambarana ”noho ny olona mameno azy ireo.” - Archer
Iray amin'ireo tononkalo Anime tsara indrindra an'ny Archers.
“Ny idealy dia idealy ihany. Raha mbola manaiky an'io idealy io ianao dia hitombo hatrany ny fifanolanana miaraka amin'ny zava-misy. Ka hiatrika ny zava-misy ianao indray andro any ary tsy maintsy handoa ny vidin'ny tolotra ataonao. ” - Archer
'Amin'ny fotoana ahafatesany no misy lanjany ny zanak'olombelona.' - Archer
Tsy misy ady hevitra amin'izany.
“Aza mieritreritra zavatra hafa, zavatra iray ihany no azonao atao. Fantaro tsara izany zavatra iray izany. Aza hadino. Ny tsy maintsy eritreretinao dia hoe ianao, ianao no matanjaka indrindra. Tsy mila fahavalo ivelany ianao. Ho anao, ilay tsy maintsy iadivanao dia tsy iza fa ny anao manokana. ” - Archer
Araka ny fitenenana - manao fanao tonga lafatra.
“Mamiratra kokoa noho ny mahazatra ny olona mamiratra. Tsy manenina na malahelo noho ny zavatra nataony mihitsy izy ireo. ' - Archer
I Archer dia nanonona ity teny nalaina ity tany am-boalohany tao amin'ny anime Fate Stay Night.
“Namono olona maro aho mba hanao zavatra mifanaraka amin'ny tanjoko. Be dia be ny zavatra novonoiko ka tsy niahy ny olona tsy manan-tsiny intsony aho ary nitahiry an'arivony betsaka noho ny novonoiko. ” - Archer
“Tsy misy na inona na inona amin'ny faran'ny fanampiana ny olona. Fiainana diso izay tsy mahavonjy ny tenanao na ny hafa. ” - Archer
'Ny ady ho an'ny hafa, fa tsy ny tenanao, dia fihatsarambelatsihy.' - Archer
Iray amin'ireo tiako indrindra Archer mitanisa manokana.
“Ary ankehitriny manana ny valinteniko aho. Aza matahotra, Tohsaka. Hiezaka ny farany vitako koa aho manomboka izao. ' - Archer
Iza amin'ireo teny Archer tianao indrindra?
Zahao ireo lahatsoratra mifandraika etsy ambany raha te hahalala bebe kokoa ny hatsaran'ny Anime!
Ny lisitry ny faratampon'ny fijanonana alina fijanonana alina
Sarimiaina Anime 30 mampihetsi-po ilainao ny misintona
anime tsara indrindra antsoina hoe slice of life
anime naoty ambony indrindra tamin'ny fotoana rehetra
anime tsara indrindra mbola tsy henonao